မန္တလေးမြို့ ချမ်းပြသာစည်မြို့နယ် ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ် အကွက် ၅၀၇တွင် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ညပိုင်းက မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေးမြို့တွင် ချမ်းပြသာစည်မြို့နယ် ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ် အကွက် ၅၀၇တွင် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့(သတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့) ည ၈နာရီခွဲအချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 23:57 No comments:
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက် ၍ ဒုတိယမြောက်ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေညာချက်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၂)ကို ယနေ့ ည (၈)နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၂)ကို ယနေ့ ည (၈)နာရီတွင်နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးတာဝန်ရှိသူဦးဇော်ဌေး(မှူးဇော်)က၎င်း၏ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှဘဏ်၃ဘဏ်နှင်. visa ကုမ္မဏီတို. နိုဝင်ဘာ၃ရက်နေ.တွင် sedona hotel ၌တရားဝင် လက်မှတ်ထိုးမည်ဖြစ်သည်။
ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် လာရောက်မည်
ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ် Ms. Helle Thorning-Schmidt သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် လာေ ရာက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဒိန်းမတ်သံရုံး၏ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
စွပ်စွဲမှုများအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်း လွှတ်တော်
ဧရာဝတီတိုင်းတိုင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးအား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက စွတ်စွဲပြစ်တင်ခဲ့သော ကိစ္စရပ်များအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ပြည်ပဘဏ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် အနည်းဆုံးဘဏ် စာရင်းငါးခုဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ် လာခြောက်ဘီလီယံအပ်နှံထားကြောင်းဝါရှင်တန်အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ စောင့်ြ ကည့်ေ န သည့်အဖွဲ့ (BIC)မှ မန်နေဂျာ Jelson Garcia ကပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပေးဆပ် ရန်ရှိသည့် ကြွေးမြီစုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀၀၀ေ ကျာ်(၁၅ ဘီလီယံကျော်)ရှိကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်
ကျမတို့ ရုံးနှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေး အတွက် နိုင်ငံ အသီးသီးက တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထဲမှာ တယောက် ကျမတွေ့တော့ တော်တော် အံ့အား သင့်သွားတယ်။ ဒီနှစ်စမှာဘဲ ဆေးစစ် တဲ့အခါ ကင် ဆာ လို့ အဖြေထွက်ပြီး ကျမတို့ တတွေ စိတ် မကောင်း ဖြစ်နေ ခဲ့တာပါ။
ဥရောပ သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ Van Rompyy နှင့် ဥရောပ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ Barroso တို့သည် လာမည့် နိုဝင်ဘာ လ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လာရောက်ရန် ရှိကြောင်း သတင်းရသည်။ ၎င်းတို့ ၂ ဦးသည် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့၌ လာအိုနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ဥရောပ သမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများဆိုင်ရာ ASEM ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်ရှိပြီး ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း စသည် နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရန် ရှိကြောင်း ဥရောပ သမဂ္ဂ က ထုတ်ပြန် ထားသည်။
Miss Myanmar နန်းခင်ဇေယျာသည် လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီ၏ Brand Ambassador အဖြစ်စာချုပ်ချုပ် ဆိုပြီးေ နာက် ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၃၁)တွင် ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်နှင့် Blue Mountain ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေကြောင်းနန်းခင်ဇေယျာ၏မန်နေဂျာဖြစ်သူကပြောကြား သည်။
30-10-12ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရှိ မိမိနေအိမ်သို့ ရခိုင်ပြည်မှ ပြန်လည်လာရောက်နေထိုင်မည့် ဘင်္ဂလီများအား လက်ရှိအာဏာရပါတီမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက ကိုယ့်အိမ်ကို မီးရှို့သူနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို လိုက်ပြီး နယ်စပ်တစ်လျှောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို တင်းကျပ်စွာချထားလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
"၂ဝ၁၂ သည် ၈၈နောက်ပိုင်း ရှို့မီးကြောင့် မီးလောင်မှု အများဆုံးနှစ်ဖြစ်"
ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းအပြီး နောက်နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်း ရှို့မီးကြောင့် မီးလောင်မှု အများ ဆုံးနှစ်မှာ ယခုနှစ်ဖြစ်ကြောင်း မီးသတ် ဦးစီး ဌာန ၏ မီးလောင်မှုမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ယခုနှစ်အတွင်းကျောက်မဲမြို့၌ ယာဉ်တိုက် သေဆုံးသူအမျုားဆုံးဖြစ်
ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်(၅)နှစ်တာအတွင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် ယာဉ်တိုက် မှုကြောင့် သေဆုံးမှု အများဆုံး နှစ်တ စ်နှ စ်ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူဦးရေ (၁၅)ဦးခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများက သိရှိရ သည်။
“ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၁၂ အထိမှာ အရင်နှစ်တွေက ယာဉ်တိုက်မှုနဲ့ သေဆုံးမှုကို လက်ချိုးရေလို့ရတယ်၊ ဒီနှစ် လို တစ်ဆယ်ကျော်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး”ဟု ကျောက်မဲမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က အတည်ပြုေ ပာကြား သည်။
ဗီယက်နမ်တွင် ဆွန်တင် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ် သုံးဦး သေဆုံး နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံး လျက်ရှိ
ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်း နင်ဘင်း ပြည်နယ်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်က အင်အားပြင်း တိုက်ဖွန်း မုန်တိုင်း ''ဆွန်တင်'' တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ သုံးဦး သေဆုံးပြီး အခြားနှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးလျက် ရှိကြောင်း ဗီယက်နမ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်သည့် VNA သတင်း ဌာန က အောက်တို ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Andorid Jelly Bean အားတရားဝင်ကြေညာ Nexus တွင်စတင် အသုံးပြုမည်
Android ရဲ့ နောက်ဆုံးဗားရှင်း Andorid 4.2 (Jelly Bean) ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ လူသားစွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန (The Ministry of Manpower -MOM) က အသက် ၂၈ နှစ်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံသား ကိုကျော်စွာဝင်းဆိုသူဟာ သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြမှု၊ ဘွဲ့လက်မှတ် အတုနဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် အမိန့်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါ တယ်။
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း ဖွင့်ပိတ်ပွဲဖျော်ဖြေမှု လူ ၁၆၀၀၀ကျော် ပါဝင်မည်
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ(ဆီးဂိမ်း) ဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲ အခမ်း အနားများတွင် ကပြတင်ဆက် ဖျော်ဖြေမှုအပိုင်း၌ စုစုပေါင်းလူအင်အား တစ်သောင်းခြောက်ထောင်ကျော် ပါဝင်ဆင်နွှဲ မည်ဖြစ်ကြောင်း ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအေးမြင့်ကြူက ပြောကြား သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ADSL စနစ်အသုံးပြုလိုသူများ သိရှိစေရန်
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ADSL စနစ်အသုံးပြုလိုသူများသည် အောက်တွင် ပါရှိသော လျှောက်လွှာပုံစံကို Download ပြုလုပ်ပြီး လို အပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအား ပူးတွဲလျှက် စာအိတ်ပေါ်တွင် အင်ဂျင်နီယာချုပ် ၊ သတင်းအချက် အလက်နှင့်နည်းပညာဌာန ၊ ရုံးချုပ်အခြေစိုက်ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး အဆောက်အဦး ၊ (၈)မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့သို့လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။
ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို ဖျက်မည့် ဒုံးလက်နက် ရုရှား တည်ဆောက်
ရုရှားသမ္မတ နိုင်ငံသည် မိမိတို့ နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာမြေအား ဝင်ရောက်တိုက် မိနိုင်သည့် ဂြိုဟ်သိမ် ဂြိုဟ်မွှားများ အန္တ ရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက် ကြီးမားသည့် ဂြိုဟ်ဖျက် ဒုံးကျည် ပစ်စင် တစ်ခုကို တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်း ဆင်ဟွာ သတင်း တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ အဆိုပါ ဒုံး လက်နက် (ရော့ကက်)သည် ကမ္ဘာပတ် လမ်းကြောင်း အတွင်း ဝင်ရောက် လာသည့် ဂြိုဟ်သိမ် ဂြိုဟ်မွှားများကို ထိရောက်စွာ ဖြိုခွဲနိုင်မည်ဟု ရုရှား၏ အာကာသ စွမ်းအင် ဆိုင်ရာ ကော်ပို ရေးရှင်းက ပြောကြားသည်။
3G ထက် ၅ ဆပိုမြန်သည့် 4G network ဗြိတိန်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်
ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့ ၁၁ မြို့တွင် 4G network ကို အင်္ဂါနေ့ (အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်) က စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ Orange နှင့် T-Mobile မိုဘိုင်းကွန်ရက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော EE ဆက်သွယ်ရေး
ကုမ္ပဏီ၏ 4G network ကို London, Bristol, Birmingham, Cardiff, Leeds, Sheffield, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Southampton နှင့် Manchester မြို့များတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သော sandy မုန်တိုင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေ
ဆန်ဒီ (Sandy) အမည်ရှိ အပူပိုင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းသည် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က န ယူးယောက်မြို့ မှ မိုင် ၄၀၀ ခန့် အကွာ၊ ကိတ်ဟက်တာရက်စ်မြို့ မှ အရှေ့တောင်ဘက်မိုင် ၂၆၀ အကွာပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုလျက် တစ်နာရီကို ၁၀ မိုင်နှုန်းဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ဦးတည် ရွေ့လျားလျက်ရှိပြီး အမေရိ ကန် အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေဒေသများကို လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၁၃၀ နှုန်းဖြင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆူဇူကီး ဖလား ပြိုင်ပွဲ အတွက် ပဏာမ ကစားသမား (၂၅)ဦး စာရင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ(၂၄) ရက်နေ့ မှ (၃၀)ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ချန်ပီယံ ရှစ် 2012 AFF SUZUKI CUP အုပ်စု(က) ပွဲစဉ်များအား ယှဉ်ပြိုင် ကစားရန် မြန်မာ့ လက်ရွေး စင် ပဏာ မ ကစားသမား (၂၅)ဦး စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
မူလက မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း လူစာရင် ကို အာဆီယံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ကသာ ၃၅ ဦး စာရင်း အဖြစ် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် အဆိုပါ ၃၅ ဦး စာရင်း ထဲမှ ၁၀ ဦးအား ချန်လှပ်ကာ ယခု ကဲ့သို့ ၂၅ ဦးစာရင်း ထုတ်ပြန် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နယူးယောက်ခ်မြေအောက်ရထားစနစ် နာလန်ထူနိုင်ရန် တစ်ပတ်ကျော်ကြာနိုင်
အဂ္ဂမဟာ စူပါမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်သည့် ဟာရီကိန်း စန္ဒီ (Hurricane Sandy) နူးယောက်ခ်မြို့ကို ကျော်ဖြတ်၍ နိဂုံးခပတ် အဆုံးသတ် သွားခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မုန်တိုင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် နူးယောက်ခ်၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြေအောက်ရထားစနစ် (Subway) ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပြီး နူးယောက်ခ်မြို့ကြီး ဒုက္ခိ တ ဖြစ်ခြင်းတည်း ဟူသော အကျိုးဆက်ကို ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ရပ်တန့်သွားမှုကို ပြန်လည် ထူေ ထာင်ပြီး နာလည်ထူလာနိုင်ဖို့ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်ကျော်ကြာနိုင် သလို ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့် အမေ ရိ ကန်ဒေါ်လာ လီလျံချီပြီး ကုန် ကျနိုင်ကြောင်း Bloomberg သတင်းဌာနက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။